I-Optical Illusion - I-Straight okanye i-Bent | Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Ukungaqondakali kwemisebenzi - ngqo okanye ephihliweyo
Imidwebo yeengcamango ezibonakalayo kunye namanani angenakwenzeka, okubizwa ngokuba ngama-paradoxes, athabathe wonke umntwana. Iingcamango zengqondo zichaza njengegama elihlanganisiweyo yonke imiba yombono womntu.
Ngakolunye uhlangothi, oku kuya kwenzeka xa sibona izinto ngokwahlukileyo kunokuba zithethwa ngethuba elithile, okanye xa abantu abahlukeneyo kwi template efanayo baqonda ezinye izinto okanye izinto zitsalwa ngendlela.
Ngokuchofoza emfanekisweni, itemplate ivula ngefomathi yepdf:
I-Optical illusion Vula ngokukhawuleza okanye ugobe njengomzobo
Ukungaqondi kakuhle - Ukuchaneka okanye ukuguquka?
Ukukhohlisa okubonakalayo - ubuso okanye i-vase
Ukungaqondakali kokubonakalayo - Ukufana okanye ayikho
Umgca wokulinganisa obala
I-Optical illusion - line
Ukukhanyela okubonakalayo - isangqa
I-Optical Illusion - Iintathu okanye ezine
Ukudla ngokuzidla kunye nentombi okanye umhlobo
Bamba kunye nentombi okanye umhlobo
Ukuhlamba kunye nomhlobo okanye intombi eroticism
I-Sauna - I-Nude okanye igqoke?
Iimpawu zokucinga kunye namanani angenakwenzeka